Sidee loo xisaabiyaa cabirka shay leh kamarada iPhone | Wararka IPhone
Xaqiiqdii in kabadan hal munaasabad ayaa nalagu qasbay inaan xisaabinno cabirka sheyga, waxaanan marwalba isku daynay inaan u adeegsano shay tixraac aan ognahay inta uu le'eg yahay qiyaastii xisaabinta cabirka sheyga la cabirayo. Khiyaanadan yar waxaa badanaa loo isticmaalaa cabbiraadaha dusha sare ee dhulka si loo cabbiro qayb ka mid ah alaabta guriga, sariirta, qolka labiska ... Nidaamka cabbiraadda qiyaas ahaan waxtar buu yeelan karaa waqti kasta oo la siiyo, laakiin haddii aan runtii u baahanno saxsanaanta, ama aan mitir ka raadinno meel kasta, ama aan raadino mitir illaa iyo inta aan ka haysanno qaanuun gacanta ku haya oo u adeegaya tixraac ahaan.
Dukaanka App-ka waxaan ka heli karnaa barnaamijyo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan cabirno walxaha mahadsanid nooc mitir ah oo shaashadda laga soo qaaday. Mitirkan yar ee jeebka ayaa naga saari kara dhibaatada marka aan u baahanahay inaan cabirno shey yar, laakiin markii cabirku ka bato shaashadda qalabka, waxa kaliya ee aan sameyn karnaa waa inaan helno cabbiraad qallafsan. Si loo xalliyo dhibaatooyinkaas, waxaan adeegsan karnaa barnaamijka VisualRuler, oo ah codsi noo oggolaanaya inaan cabirno cabbirka walxaha iyadoon haysan taliye ama mitir gacanta ku haya.
VisualRuler wuxuu adeegsadaa farsamooyinka aragtida kumbuyuutarka si loo xisaabiyo cabbirka walxaha ku jira sawirka. Tan awgeed waxaan u baahan doonnaa inaan shay ka dhigano tixraac ahaan. Shaygaani waa kaarka amaahda, kaarka magdhawga, laysanka darawalnimada ... Dhammaan walxahaasi waxay leeyihiin dherer isku mid ah, waxay noqon kartaa dhowr milimitir, laakiin waxaa loo adeegsadaa inay yihiin leydi tixraac si loo xisaabiyo cabirka walxaha diyaaradda ku jira.
Hawlgalka codsigan waa mid aad u fudud, maadaama aan kaliya ka qaadan karno sawir shayga aan dooneyno inaan ku helno cabbiraadaha iyo kaarka deynta. VisualRuler wuxuu si otomaatig ah u ogaan doonaa kaarka uu u isticmaali doono tixraac ahaan si uu u sameeyo cabirka. Talaabada xigta waa inaan kaliya sawiraan xariijimaha walxaha aan dooneyno inaan ku helno cabirka si aad noo siiso cabirka la xisaabiyey ee sheyga la sheegayo.
Soo-saaraha wuxuu noo xaqiijinayaa in mid ka mid ah sawirrada aan qaadno aan la geyn doonin wax server ah annaga oo aan ka warqabin oo lagu heli karo xogta kaarka deynta. Si buuxda loo xasilloono, waxa ugu fiican kiisaskaas ayaa ah isticmaal mid kaararka batroolka ama kaararka dhibcaha ganacsiga halkii aad ka samayn lahayd kaarka deynta.
VisualRuler ayaa loo heli karaa in laga soo dejiyo App Store-ka oo ah 2,99 euro, laakiin wakhti kooban waxaan ku heli karnaa 1,99 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Sida loo xisaabiyo cabirka shay leh kamarada iPhone-ka
Kuwani waa dhammaan wararka la yimid macruufka 10 beta 4